महेश बस्नेतले भने : असल संस्कारयुक्त परिवारमा हुर्केको मान्छे हुँ - Kantipath.com
महेश बस्नेतले भने : असल संस्कारयुक्त परिवारमा हुर्केको मान्छे हुँ
नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले आफुले खगेन्द्र संग्रौलालाई धम्की नदिएको दावी गरेका छन् । एमाले ओली निकट मानिएका बस्नेतले आफुलाई धम्की दिएको संग्रौलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुलासा गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै बस्नेतले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्– ‘खगेन्द्र संग्रौला बाजेले आज फेरि अर्को गफ दिएछन् । गाली शिरोमणिको उपमा पाएका बाजे अरुलाई होच्याउन र अपमान गर्न निकै सिपालु मानिन्छन् ।’
त्यस्तै बस्नेतले आफु भक्तपुरको असल संस्कारयुक्त परिवारमा हुर्केको दावी पनि गरेका छन् । ‘म भक्तपुरको असल संस्कारयुक्त परिवारमा हुर्केको मान्छे हुँ । राजनीतिक रुपमा पनि जेष्ठ नागरिक र अग्रजहरुको सम्मान गर्ने एमाले उक्त पार्टीका नेताहरु मनमोहन अधिकारी र केपी ओलीको अनुयायी हुँ । सेवा र आदरभावका साथ प्रस्तुत हुनु मेरो स्वभाव हो । धम्क्याउने थर्काउने मेरो शैली होइन’ बस्नेतले प्रस्टिकरण दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘खगेन्द्र संग्राैला बाजेले अाज फेरि अर्को गफ दिएछन। गाली शिरोमणिको उपमा पाएका बाजे अरुलाई होच्याउन र अपमान गर्न निकै सिपालु मानिन्छन् ।
म भक्तपुरको असल संस्कार युक्त परिवारमा हुर्केको मान्छे हुँ। राजनीतिक रुपमा पनि जेष्ठ नागरिक र अग्रजहरुको सम्मान गर्ने एमाले उक्त पार्टीका नेताहरु मनमोहन अधिकारी र के पी अोलीको अनुयायी हुँ। सेवा र अादरभावका साथ प्रस्तुत हुनु मेरो स्वभाव हो । धम्काउने थर्काउने मेरो शैली होइन ।
जहाँ सम्म अस्ति ९ गते उपत्यका युथ फोर्स कमान्ड घोषण सभामा मैले बोलेको बिषय छ। न खगेन्द्र बाजेलाई धम्की दिएको छ। न माधव नेपाल कमरेडलाई थर्काएको छ। न तेसो गर्न अावस्यक नै छ।
युथ फोर्सले जाई कटक नगर्नु झिकि कटक गर्नु भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको फलो गर्नेछ । सहज ढंगले आफ्नो लक्षमा हिडनेछ। वाधा अडचन अाइपरे मात्र हटाउनेछ। एमालेको पक्ति र जनतन संग सत्रुता साँध्ने शक्ति वाहेक कोही त्रसित हुन अनवस्यक छैन। युथ फोर्सको गठनले असाहाय, पिडित, गरिव, देशभक्त, प्रगतिशील र जनवादी शक्ति उत्साहित भएको छ।
बाँकी कनफ्युजन हटाउन मैले बोलेको सुन्नुहोला ।’
Previous Previous post: ओलीको पछि लाग्दा बिल्लीबाठ : गुम्ने भयो पार्टी र सांसद पद !
Next Next post: जसपा अब बाबुराम -उपेन्द्रको : महन्थ-राजेन्द्रले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने !
पाँचखालमा मूर्ति फेला, सम्पदा संरक्षण गर्न माग
दुई हजार घुसलिने सुब्बा पक्राउ
क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी महिलाले जन्माइन् जुम्ल्याहा बच्चा, कोरोना नभएको पुष्टि
बालुवाटारमा देउबाको पाँचौ इन्ट्री